AMPASIMADINIKA RN2 : Tra-tehaky ny polisy ireo jiolahy mpanao fanafihana
Nisesisesy tato ho ato ny fanafihana mitam-piadiana tao amin’ny Kaominina Ambinaniniony distrikan’i Brickaville. Anisany lasibatra ny fokontany Ampasi-madinika Rn2, Ambohimarina, Sahavandana, Anjamany. 11 octobre 2018
Ny alin’ny sabotsy lasa teo, dia tokantrano miisa fito no nisy nanafika. Olona maro no naratra. Ny 3 izay fantatra fa mbola miady amin’ny fahafatesana ao amin’ny Hopitaly Be Toamasina vokatry ny tifitra nahazo azy ireo. Basy calibre 12 no nampiasain’ireo mpanafika.
Manoloana io tranga io, nisy ny toromarika nomen’ny Tale provinsialin’ny polisim-pirenena ao Toamasina, ny Kaomisera divizionera Ramampiandry Nicolas, an’ireo polisy eo ambany fifehezany. Ny tolakandron’ny talata 9 oktobra, nisy avy hatrany ny hetsika manokana niarahan’ny Fip sy ny Uir nanatanteraka. Nidina tany ifotony nikaroka an’ireo mpanao ratsy. Nifanome tanana tamin’ ny mpitandro filaminana rahateo ireo sefo fokontany.
Nahitam-bokatra io fidinana natao tany ifotony io. Voasambotra i James Goly 18 taona sy Rira Lalaina. Izy roalahy izay fantatra fa mpanao fanafihana mitam-piadiana araka ireo porofo rehetra teo am-pelatanan’ny fokonolona sy ny mpitandro filaminana. Anisany voasambotra niaraka tamin’izy ireo koa i Romeo Stéphan 43 taona. Ity farany izay mpiasa amina tetikasa iray ary mahalala tsara ireo tanàna sy lalana ary mpandraharaha ao amin’ny Kaominina Ambinaniniony. Io Romeo Stéphan io no mpanoro lalana sy mpanome ny mombamomba olona na tokantrano hotafihina an’ireo olon-dratsy. Hitondra filaminana ao amin’ny Kaominina Ambinaniniony Brickaville izao vokatra azon’ny polisy avy ao Toamasina izao.